တရုတ္က ဗီဒီယိုဖလက္ ေဖာင္းပ်က္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေၾကညာလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေကအန္ယူတို႔ ညႇိေန - Pandaily
တရုတ္က ဗီဒီယိုဖလက္ ေဖာင္းပ်က္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေၾကညာလိုက္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေကအန္ယူတို႔ ညႇိေန
Categories: Industry ကိုPandaily စက်တင်ဘာ 28, 2021 စက်တင်ဘာ 29, 2021 မှာ Posted
ကဓဇဗီဒီယိုဖေါင်းတိုတိုနဲ့ Fast Hand Today က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသွားပါမယ်၊ပါတီသစ်ဖွဲ့စည်းမှု စတင်ချိန်ညှိပြီ.
ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာ ဖော်ပြနေတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင် အော်ပရေတာ တွေ၊ လျှပ်စစ်တွေ၊ စက်ယန္တရားတွေ၊ လက်သည်လိုင်းတွေ၊ စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ အမာခံ စီးပွားရေးယူနစ်တွေ၊ ဒီဘီးတပ်အဆောက်အအုံတွေကို ပိတ်ဖို့ ညှိပြီးမှ ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ပိတ်လိုက်သည့်အတွက် ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ခိုင်ခံ့မှု အပါအဝင် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ သုတေသန၊ အချက်အလက် စိစစ်ရေး စသည်တို့ ကွဲပြားသွားမည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် ပိုမိုတိုးတက်လာပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ပိုမိုချောမွေ့လာမည်ဟု ဆိုသည်။
ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ညှိနိုင်းပြီး တည်ဆောက်ထားတဲ့ Opportunities Line ကို တရားဝင်တည်ထောင်ပြီး ပါဝင်မယ့် ထုတ်ကုန်တွေ၊ အော်ပရေတာတွေ၊ သုံးစွဲသူတွေ ကြီးထွားလာမှု၊ ဂိမ်းကစားမှု၊ ဂေဟစနစ်ရှာဖွေမှု စတာတွေကို ကဏ္ဍပေါင်းစုံက စုပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အျပင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူ၊ စီးပြားျဖစ္သူ၊ ႏိုင္ငံတကာ၊ ဂိမ္းကစားသူ စတာေတြေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း က႑ေလးခုကို ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။
Topics: မြင်ကွင်းFast Hand Search Service ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံအသစ္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္တဲ့: သူတို႔ရဲ႕ Life Style တစ္ခုခ်င္းစီကို တံု႔ျပန္ျခင္း
ဒါ့အျပင္မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးဒီကေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဒုသမၼတရန္ေအာင္ဟာ ကိုယ္လက္အဂၤါ မသန္တာေၾကာင့္ ထြက္ခြာေတာ့မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ယခင်က ယခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဖွဲ့စည်းပုံကို ချိန်ညှိမည့် Wang Jung Wai Yan ကို အောင်မြင်သန်စွမ်းသည့် Department of Deputy Chief of Department တွင် အကြီးအကဲအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလကုန်ပိုင်းလောက်မှာ Yang Yang ဟာ Head of Commercial Chief အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး Ma Hong Bin နဲ့အတူ Chief Operation ကို တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။
Tags: *Kuaishou | E-Commerce | Game | restructuring | short video app
ဘူတာ B သည် ၂၀၂၁ ကျည် ဆံ နှစ်ပတ်လည် ချက် တင်-“ Po Fang Le” ကို ကြေငြာ ခဲ့သည်
ကိုPandaily Nov 29 Nov 30 မှာ Posted
တရုတ္ လူငယ္ မ်ိဳးဆက္ ဗီဒီယို အသိုင္းအ၀ိုင္း B က "Po Fang Le" (စာသား အရ "This Breaked my Defens" ဟု ဘာသာျပန္ ဆို ထားသည္) သည္ "Bullet Chat 2021 Bullet Chat" ဟု တနလၤာေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။
Tyrafos သည် Yunqi Partners ဦး ဆောင်သော Round A + ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
တနင်္လာနေ့တွင် CMOS image sensor design service provider Tyrafos သည် Yunqi ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များ ဦး ဆောင်သော ရန်ပုံငွေ A + ပြီးစီး ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
System-level ချစ်ပ် ကုမ္ပဏီ Actions Semiconduction သည် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်း တွင် စာရင်းဝင် သည်
ကုမ္ပဏီသည် လူသိများသော ပြည်တွင်း စွမ်းအင် နိမ့် system-on-chip (SoC) ဒီဇိုင်နာ ဖြစ်ပြီး အသိဥာဏ် ရှိသော IoT ထုတ်ကုန် များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပေါင်းစပ်ထားသော ချစ်ပ် များကို အာရုံစိုက်သည်။
Xiaomi သည် Wuhan တွင် စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရန် ယွမ် ၂ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်
တနင်္လာနေ့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း အချက်အလက်များအရ Wuhan Yibaling Enterprise Management Co., Ltd. ကို ယွမ် ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ၁၃. ၅ သန်း) ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Vivo အနေနဲ့ Snapdragon 870 ပါတဲ့ တက်ဘလက် ထုတ်ကုန် တွေကို မိတ်ဆက် တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်
လက္ရွိမွာေတာ့ Snapdragon 870 SoC ပရို ဆက္ ဆာ ပါဝင္တဲ့ Tablet Product ကို မိတ္ဆက္ ဖို႔ စီစဥ္ ေနပါတယ္။